सुशासन एप–सिंहदरबार- विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — कृषि विभागले केके काम गर्छ ?, वैदेशिक रोजगार विभागमा कसरी सेवा लिने ? पासपोर्ट बनाउने फाराम कसरी भर्ने ? यिनै जानकारी सहितको सिंहदरबार एप सार्वजनिक भएको छ ।
यसलाई सार्वजनिक गर्ने संस्था सर्च फर कमन ग्राउण्डले यसलाई ‘सुशासन एप’ भनेको छ ।
गतसाता राजधानीमा भएको नेक्स्ट ग्रोथ कन्क्लेभमा यसलाई सार्वजनिक गरिएको हो ।
एपमा विभिन्न सरकारी निकायले दिने सेवा, ति सेवा लिन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी दिन्छ । संस्थाका कन्ट्री डाइरेक्टर डा. भोलाप्रसाद दाहालले एपले सुशासनको लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
एपमा सुशासनसम्बन्धी टेलिभिजन कार्यक्रम सिंहदरबार र रेडियो कार्यक्रमसम्म समेत हेर्न र सुन्न सकिन्छ । साथै, नेपालको संविधान नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा पढ्ने सुविधा छ ।
सर्च फर कमन ग्राउण्डका सञ्चार संयोजक आयूष जोशीले एपले सरकारी सेवा र अन्य जानकारीहरु दिने भएकाले हरेक व्यक्तिको लागि यो उपयोगी हुने बताए ।
प्रकाशित : पुस १५, २०७४ १६:३९
‘लाहुरे’को रिलिज मिति घोषणा
काठमाडौँ — पूर्व मिस सृष्टि श्रेष्ठ, नरेन लिम्बु र मिरुना मगर अभिनित चलचित्र लाउरेको प्रदर्शन मिति घोषणा भएको छ ।
वैशाख २८ गते (११ मे) मा फिल्म देशव्यापी रिलिज हुने निर्माण कम्पनी दुर्गिस फिल्मसले जनाएको छ ।
पप गायकको रुपमा ख्याति बटुलेका लिम्बु यही चलचित्रमार्फत डेब्यु गर्दैछन् ।
विक्रमसिंह थारु निर्देशित फिल्मलाई सुनिल रावल, ईश्वर श्रेष्ठ, सुवास लामिछाने र भेषमणी श्रेष्ठले निर्माण गरेका हुन् ।
आलोक शुक्लाको छायांकन रहेको सिनेमाको पटकथा नेगेटिभ बुद्धले लेखेका हुन् ।
प्रकाशित : पुस १५, २०७४ १५:५१